Wasiir Qarjab: 21 qof ayay deeleen Argagixisadu | Waayaha
You are here: Home 2017 February Wasiir Qarjab: 21 qof ayay deeleen Argagixisadu
Wasiirka wasaaradda Amniga Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa maanta dib ugusoo laabtay magaalo Madaxda Garowe kadib safar muddo qaatay oo arrimo caafimaad ugu maqnaa dalka dibadiisa.
Soo dhaweyn ayaa loogu sameeyay duleedka magaalada Garowe, wuxuuna ka hadlay xaaladiisa caafimaad isagoo sheegay inay aad u wanaagsanyahay.
Wuxuu soo hadal qaaday arrimo ku aadan nabad-galyada Puntland iyo gurmadka abaaraha, wuxuuna sheegay in kooxaha nabad-diidka ah hortaaganyihiin in kaalmo loo aruuriyo dadka shacabka ah. Kooxaha argagixisada ah ee ku sugan gobolka Bari, ayuu sheegay inay dileen in kabadan 21 ruux.
“Waad garan kartaan gobolka Bari ilaa 21 qof ayaa kooxaha Argagixisadu ee Al Shabaab iyo Daacish ku dileen inta u dhaxaysay bishan iyo tii hore,”Ayuu yiri mudane Qarjab oo warbaahinta Garowe kula hadlayay.
Wasiirka ayaa dowladda iyo shacabka ugu baaqay in lala shaqeeyo laamaha amniga si nabad-galyada gacanta loogu dhigo.
Qarjab ayaa intaas ku daray in gobolka Bari uu joogay muddo sideed casho ah islamarkaana ka qabteen howlo badan, balse wuxuu qiray in bulshada la cabsi galiyay.
Mudane Qarjab ayaa dhinaca kale xusay in shacabka Somaliyeed aad u daallanyihiin islamarkaana u baahanyihiin wax-qabad.
Madaxweynaha cusub ee Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray.
Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa muddo 5 bilood ah safar caafimaad ugu maqnaa dalka India, kadib markii uu ku dhaawacmay shaqaaqo dhex-martay saraakiil katirsanayd Booliiska Puntland waqti lagu sugnaa Bosaso.
Wuxuu kusoo xiray hadalkiisa in la laalo kuwa katirsan Al Shabaab ee wali ku jira xabsiyada ku yaalla magaalooyinka Puntland, maadama iyaguba shacabka tooganayaan.